Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la leh labo kamid ah Madaxda maamul goboleedyada – Mudug24
Homewararka DalkaMadaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la leh labo kamid ah Madaxda maamul goboleedyada
Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la leh labo kamid ah Madaxda maamul goboleedyada
July 23, 2020 admin wararka Dalka, Wararka maanta 0
Magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Galmudug waxaa ka socda kulan albaabada u xiran yihiin oo ay leeyihiin Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya iyo Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweyne Farmaajo ayaa kala hadlaya Axmed Madoobe iyo Saciid Deni sidii xal looga gaari lahaa khilaafka dowlada federaalka iyo maamuladooda si loo soo celiyo wada shaqeynta iyo xiriirka labada dhinac.
Kulanka oo ah mid albaabada u xiran yihiin ayaa wararku sheegayaan in diirada lagu saarayo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha iyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay arimaha doorashooyinka iyo arimo kale.
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa sameestay isbaheysi ka dhan ah dowlada federaalka Soomaaliya, waxaana labadan maamul noqdeen mudooyinkii dambe kuwa siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowlada federaalka aadna u dhaliila madaxdeeda.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Dhuusomareeb kulama kala duwan kula qaatay Madaxda maamul goboleedyada oo magaaladaasi u tagay shirka looga arinsanayay arimaha doorashada dalka.
Dowlada Federaalka oo xayiraada ka qaadeysa Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo sharuudo ku xiray
Sacuudiga oo ka hadlay xaalada Boqor Salman oo maalmo ka hor maray Qaliin